कोरोना संक्रमणबाट पर्सामा एकै दिन २ जनाको मृत्यु : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsकोरोना संक्रमणबाट पर्सामा एकै दिन २ जनाको मृत्यु
वीरगन्ज । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि पर्सामा एकै दिन दुई संक्रमितको मृत्यु भएको छ । वीरगन्ज १६ की ६१ वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको १० घण्टा पछि वीरगन्ज महानरपालिका १९ विन्दवासिनीका ६३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
मृतक पुरुषलाई वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा गएको ५ गते आइतबार नै भर्ना गरिएको थियो । उनको आरटी पिसिआर पोजेटिभ रिपोर्ट ६ गते सोमबार आएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा सरोजरोशन दासले बताए । बिहीबार उपचारका क्रममा उनको निधन भएको डा. दासको भनाइ छ ।
मृतक पुरुषको बिहीबार बिहान करिब १० बजेर ५० मिनेटमा मृत्यु भएको हो । बिहिबार नै मृत्यु भएकी महिलाको भने बिहान करिब १ बजेर १५ मिनेटमा मृत्यु भएको डा. दासले बताए । नारायणी अस्पतालमा दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण एकैदिन दुई जनाको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो । कोरोनाको दोस्रो लहर बढेयता वीरगन्जका अस्पतालमा ल्याइएका मध्ये कुल ९ जनाको मृत्यु भइसकेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । तिनीहरु मध्ये दुई जनाको भने नीजि अस्पताल नारायणी बयोधामा र ७ जनाको भने नारायणी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको
मृतक मध्ये सात जनाको नारायणी अस्पतालमा र २ जनाको वीरगन्जकै नीजि अस्पताल नारायणी बयोधामा मृत्यु भएको चिकित्सक दालले बताए ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरूले संसद् पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिना अघि अनिवार्य अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठलाई सेवामै रहने गरी दिएको अल्पकालीन...
धनकुटा । धनकुटाकी समिता ढुङ्गेलले बीबीएस प्रथम बर्षमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएकी छन् । लिवर्टी कलेज धनकुटामा अध्ययनरत ढुङ्गेलले व्यवस्थापन (बीबीएस) तर्फ स्नातक तह प्रथम...
प्रदेश २ मा ६८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
बर्दियामा बन्यो महिलामैत्री क्वारेन्टाइन
नेयमार कारबाहीबाट बचे
तुलसी भण्डारी - July 27, 2021